I-Constance yeCastile: Umfazi wesibini kaJohn waseGaunt
Umthombo we-John of Gaunt's Claim to Spain
Inkqubo yeCastile Facts:
Eyaziwa ngokuba: isimangalo sakhe kwisithsaba seCastile sabangela umzamo wendoda yakhe, uJohannes Gaunt waseNgilani, ukulawula loo mhlaba
Imihla: 1354-Matshi 24, 1394
Umsebenzi: i- royal consort, i-heiress; Umfazi wesibini kaYohn of Gaunt, owokuqala uDuc of Lancaster
Kwaziwa nangokuthi: uConstanza waseCastile, i-Infanta Constanza
Unina: UMaria de Padilla, inkosikazi okanye umfazi oyimfihlo kaPedro uMninimandla weCastile
Utata: UPedro (uPetros) onobugwenxa, uKumkani waseCastile
Umfazi wesibini kaYohn wase Gaunt, owokuqala uDuke waseLancaster, unyana wesithathu ka-Edward III; kutshata 1372
intombi yabo, uKatherine waseLancaster, watshata noHenry III waseCastile, inkosi yaseTrastamara
unyana wabo, uJohn Plantagenet, behlala ku-1372-1375
I-Constance yeCastile Biography:
Inkokheli yendima yeCastile kwimbali ngokuyinhloko isekelwe kumtshato wakhe kuYohn of Gaunt, iDuke of Lancaster kunye nonyana wesithathu kaKing Edward III waseNgilani, kwaye isikhundla sakhe njengendlalifa kayise eCastile.
UJohn of Gaunt kunye neConstance yaseCastile babenabantwana ababini kunye. Intombi yabo, uKatherine waseLancaster, bahlala batshata. Unyana wabo, uJohan Plantagenet, behlala iminyaka embalwa nje.
Udade omncinci waseConstance u-Isabel waseCastile watshata nomntakwabo kaJohn wase Gaunt, uEdmm of Langley, owokuqala uDuke waseYork kunye nonyana wesine ka-Edward III waseNgilani. Iimfazwe kamva zeRos zalwa phakathi kwenzalo ka-Isabel (iqela laseYork) kunye nenzalo kaJohn of Gaunt, umyeni kaConstance (iqumrhu laseLancaster).
Ngo-1369, uyise kaConstance, uKing Pedro waseCastile, wabulawa kwaye u-Enrique (uHenry) waseCastile wathatha amandla njengongomntu. Umtshato kaConstance ngo-1372 ukuya kuYohn of Gaunt, unyana ka-King Edward III wase-Ngilani, wayezama ukumelana neNgilani kunye neCastile kwiMfazwe yaseSpain eyayiqhubela phambili, ukuthoba u-Enrique owayevela kwiFrentshi.
Ngaphantsi komthetho waseSpain, indoda yendoda eyindlalifa yesitrone yayingummkani ofanelekileyo, ngoko uYohn of Gaunt walandela isithsaba seCastile esekelwe kwisimo sikaConstance njengendlalifa kayise. UJohn of Gaunt ufumene ukuqashelwa yiPalamente yeNgesi yaseConstance kunye nesibango sakhe seCastile.
Xa uConstance efa ngo-1394, uJohn of Gaunt wehla ukusukela kwakhe isithsaba sikaCastile. Wangcwatywa ecaweni eLeicester; UJohn, xa wafa kamva wangcwatywa nomkakhe wokuqala uBlanche.
UJohn waseGaunt wayeqalise umtshato kungekudala ngaphambi okanye emva komtshato wakhe kwiConstance, kunye noKatherine Swynford owayeye kwiintombi zakhe ngomfazi wakhe wokuqala. Abantwana abane bakaKatherine Swynford noJohn of Gaunt bazalwa ngexesha lomtshato kaYohn kwiConstance (1373 ukuya ku-1379). Emva kokufa kukaConstance waseCastile, uJohn of Gaunt watshata noKatherine Swynford ngoJanuwari 13, 1396. Abantwana bakaJohn of Gaunt noKatherine Swynford babesemthethweni kwaye banikwa igama nguBeaufort, nangona i-legitimate yacacisa ukuba aba bantwana kunye nenzalo yabo babeza kuba engabandakanywa kwi-succession royal. Nangona kunjalo, intsapho elawulayo yaseTudor yayisuka kulaba bantwana abemthethweni bakaJohn noKatherine.
I-Constance yeCastile kunye no-Isabella I waseCastile
Nangona uJohn of Gaunt wehlile ukukhangela isithsaba seCastile xa uConstant efa, uJohn of Gaunt walungiselela ukuba intombi yakhe nguConstance, uKatherine waseLancaster, watshata no-Enrique (Henry) III waseCastile, unyana ka-King John of Gaunt wazama ukuyivula. Ngalo mtshato, u-Pedro kunye no-Enrique bahlala behlangene. Phakathi kwenzalo yalo mtshato kwakungu- Isabella I waseCastile owatshata noFerdinand waseAragon, wehla kuYohn of Gaunt ngomfazi wakhe wokuqala, uBlanche waseLancaster. Enye inzala kwakunguCatherine waseAragon , intombi ka-Isabella I waseCastile noFerdinand waseAragon. Wayebizwa ngokuba nguConstance kunye nentombi kaYohn uKatherine waseLancaster, kwaye wayeyindoda yokuqala kunye no-Queen queen of Henry VIII waseNgilani, unina ka-Queen Mary I waseNgilani.
Iimithetho zeeNkundla zeMvume kunye neendlela zeFredited Programs
Ikhalenda ka-Oktobha yeZenzo eziBalulekileyo kunye neZokuzalwa
Zingaphi iiprotoni, i-Neutron, nee-Electron zi-Atom?
ImiSebenzi Yokufunda Engaphucula AmaBakala kunye nokuSebenza